Madaxweynaha Juventus Andrea Agnelli oo sharaxaad ka bixiyay sababta ay ula soo saxiixdeen Cristiano Ronaldo – Gool FM
Madaxweynaha Juventus Andrea Agnelli oo sharaxaad ka bixiyay sababta ay ula soo saxiixdeen Cristiano Ronaldo
(Juventus) 17 Sab 2018. Madaxweynaha Juventus Andrea Agnelli ayaa sharaxaad ka bixiyay sababta ay kala soo saxiixdeen Cristiano Ronaldo kooxda Real Madrid suuqii dhawaa ee xagaaga.
“Waa markii ugu horeysay ay kooxda Juventus sameyso saxiixa isugu jira heshiis ganacsi iyo ciyaaro intaba, waxaan isku duba ridnay wax walba ee gudaha iyo dibada garoonka ka ah, hor inta uusan Cristiano Ronaldo imaanin kooxda”.
“Waxaan lasoo saxiixanay Cristiano Ronaldo, si ay kooxda Juventus u noqoto mid dhameystiran, isla markaana ay u noqoto kooxda koowaad ee caalamka, waxaan diirada saari doonaa sida aan ku noqon lahayn kooxda ugu fiican aduunka”.
33 jirkaan reer Portugal ee Cristiano Ronaldo ayaa Juventus kaga soo dhaqaaqay suuqii xagaaga ee lasoo dhaafay kooxda Real Madrid, heshiis ku kacay 100 milyan euro ah.
Benzema oo daaha ka qaaday sababta ka danbaysa qaab ciyaareedkiisa wanaagsan
WAABERI vs SHIBIS: Goorma ayaa la ciyaarayaa Finalka Tartanka Degmooyinka...(Howl adag oo ka socota Garoonka Benaadir)+SAWIRRO